तिथि मेरो पत्रु » तिथि मेरो पत्रु डेटिङ सुरक्षा
तिथि मेरो पत्रु डेटिङ सुरक्षा
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जनवरी. 13 2021 |3मिनेट पढ्न
अनलाइन डेटिङ सुरक्षा सल्लाह सुझाव
अनलाइन डेटिङ परम्परागत डेटिङ भन्दा सुरक्षित अनुभव हुन सक्छ. यो तपाईं विकल्प को एक व्यापक क्षेत्र दिन्छ र तिमीलाई भेट्न तयार छन् जबसम्म तपाईँ एउटा दूरी मा रहन सक्छौं.
तपाईं वा तपाईं कुनै पनि कथाहरू द्वारा चिन्तित छन् तपाईं सुन्नु भएको हुन सक्छ अघि यो गर्नुभएको छ भने कहिल्यै, यहाँ केही सुझावहरू छन् तपाईं सुरक्षित अनलाइन डेटिङ गर्न:
आफ्नो प्रवृत्ति भरोसा. यदि केही कुरा सही महसुस गर्दैन, किन मौका लिनु. gracefully Disengage, यदि यो काम गर्दैन, बस disengage.
वास्तविक यो राख्न. तपाईं आफ्नो प्रोफाइल सिर्जना गर्न सक्छन् हुँदा इमानदार हुन, तपाईं त भ्रममा गर्न कसैले बहकाउन छैन चाहनुहुन्छ छैन. यो पनि 6'2 छन् बहाना धेरै गाह्रो छ″ जब तपाईं साँच्चै 5'6 छन्″!
फोटो पोस्ट, तर तपाईं आफ्नो परिवार पहिचान गर्न सक्छन् गर्न, मित्र, यो घर वा कार.
नियन्त्रणमा राख्न. पोस्ट व्यक्तिगत जानकारी पनि चाँडै कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी दिन छैन अप ठ्याक्कै तपाईंलाई यो दिइरहेका छन् जो थाह बिना वा.
आफ्नो पहिचान सुरक्षित. आफ्नो इमेल ठेगाना खाल हाम्रो जस्तै साइट र आफ्नो सम्पर्क जानकारी प्रयोग.
धेरै सजिलै आर्थिक कुनै पनि कुरा जोगिन. के तपाईं कहिल्यै अनलाइन कुनै पनि वित्तीय जानकारी खुलासा गर्नुपर्ने कुनै कारण छ.
नगर्नुहोस् वित्तीय सहायता लागि अनुरोध द्वारा लालच हुन, कसैले पैसा को लागि तपाईं सोध्नुहुन्छ भने उनीहरूसित भरोसा तालमेल तपाईं निर्माण गरेका छन् भने पनि, उनि लगभग निश्चित scammer छन्.
के तपाईं तयार छन् अघि तपाईं र विशेष गरी बैठक मा चाहँदैनन् भन्ने कुनै पनि जानकारी वा तस्वीर दिने मा दबाब हुन.
तपाईं अनिश्चित हुनुहुन्छ भने, तपाईं कुरा छन् जो एक तस्बिर लागि अनुरोध.
तपाईं आफ्नो प्रोफाइल मा लेख्न र कुराकानी गर्दा के लाग्छ. यसलाई सही स्वर र इरादा व्यक्त गर्छ?
तपाईं को लागि आफ्नो चिरजीवी प्रेम घोषणा गर्ने जो कोही को wary हुन, विशेष गरी यदि तपाईंले तिनीहरूलाई कहिल्यै भेटेको छु.
जब तपाईं पूरा गर्न तयार छन्, जाँच हाम्रो व्यक्ति डेटिङ सुरक्षा सल्लाह तल
व्यक्ति डेटिंग सुरक्षा सल्लाह
यस्तो हाम्रो रूपमा अनलाइन सेवा मार्फत डेटिङ सुरक्षित अनुभव छ तर उत्तेजना को भीड संग यो तरिका राख्न कहिलेकाहीं भूल गर्न सजिलो छ.
के तपाईं आफ्नो सपना को अनलाइन मिति भेटेको छु लाग्छ वा तपाईं बस उत्सुक हुनुहुन्छ शायद तर तपाईं पूरा गर्न सहमत भए गर्नुभएको. तपाईं एक अनुभवी dater हुन सक्छ या शायद डेटिङ गर्न एक सम्बन्ध समाप्त भएको छ पछि अप बैठक लागि सल्लाह केही छिटो शब्दहरू फर्केपछि तर यहाँ:
नगर्नुहोस् प्राप्त मितिमा धक्का र पक्कै पनि आफ्नो व्यक्तिगत सम्पर्क विवरण भन्दा दिन छैन तपाईं त्यसो गर्न सहज छन् नभएसम्म छैन. आफ्नो घर वा कार्यालय ठेगाना कहिल्यै दिन बाहिर के तपाईं थाह पूर्ण विश्वस्त छन् र आफ्नो मिति भरोसा गर्न सक्छौं नभएसम्म.
तपाईं तिनीहरूलाई पनि भेटेको छु अघि सेक्स वा आर्थिक वार्ता गर्ने जो कोही जोगिन. धेरै सजिलै लागि चिरजीवी प्रेम घोषणा गर्ने जो कोही को wary हुन.
जब तपाईं ती पहिलो केही मिति लागि पूरा, तपाईं दुवै सजिलै पहुँच छ र अन्य मानिसहरूको दृश्य र सुनुवाई दूरी भित्र छ कि एक तटस्थ सार्वजनिक स्थान छनौट.
के तपाईं बैठक गर्ने भरोसा कसैले बताउन, तपाईं जा र कुन समयमा कहाँ के तपाईं त्यहाँ गर्ने योजना. आफ्नो योजना अद्यावधिक प्रदान गर्न नभुल्नुहोस् परिवर्तन भने.
मा 'जाँच गर्न कसैसित व्यवस्था’ यसलाई गइरहेको कसरी नियमित अन्तरालहरुमा र तिनीहरूलाई बताउन एक coded तरिका छ, तपाईंलाई मदत चाहिन्छ, विशेष गरी यदि.
आफ्नो प्रवृत्ति भरोसा, केही गलत छ यदि तपाईंलाई लाग्छ कि, तपाईं भद्रताका साथ बहाना बनाउन र छोड्नुपर्छ.
वा आफ्नो बैठक ठाउँबाट परिवहन लागि आफ्नो मिति मा कहिल्यै भरोसा, विशेष गरी मामला मा आफ्नो यात्रा घर योजना तपाईं अप्रत्याशित रूपमा छोड्न आवश्यक. यदि तपाईं एउटा आवश्यकता एउटा ट्याक्सी नम्बर सजिला छ.
तपाईं एउटा ट्याक्सी सँगै घर जान छ भने, बन्द ड्रप गर्न अन्तिम प्रयास तर कम्तिमा तपाईं ठ्याक्कै कहाँ बाँच्न आफ्नो मिति नदेखाउनको.
के तपाईं बारेमा आफ्नो बुद्धिमत्ता राख्न भनेर रक्सी सावधान रहनुहोस्. तपाईं आफ्नो खाना वा पेय संग बिग्रेका गरिएको छ लाग्छ भने यसलाई उपभोग छैन.
पक्का पर्याप्त मिनेट संग एक पूर्ण चार्ज फोन बनाउन.
आफ्नो मिति नै चिन्ता छ र केहि पनि गरिरहेको तिनीहरूलाई धक्का छैन सक्छ कि आदर तिनीहरूले संग आराम गर्दै छन्.
11 डेटिङ सल्लाह मा लागि शीर्ष पन्ने 2015
5 नाश्ता पहिलो मिति प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ किन कारणहरू
एक विभाजन को दुखाइ कसरी सुख गर्न
5 गल्ती पुरुष त्यो एक सम्बन्ध बिगार्न सक्छ बनाउन
शीर्ष 10 फोटो भूलों
© Copyright 2021 तिथि मेरो पत्रु. संग गरे द्वारा 8celerate स्टूडियो